Manohy ny ezaka hatrany ireo polisy miasa isak'ireo boriborintany miisa valo eto an-drenivohitra. Nampitombo ny fisafoana sy ny fidinana any amin'ireo toerana mafana izy ireo mba hanafoanana ireo asan-jiolahy matetika miseho eny anivon'ny fiaraha-monina eny. Ho an'ny kaomisarian’ Isotry manokana dia nisy ny fidinana nataon'ny polisy nanao fanamiana sivily mba hanamora ny fanenjehana ireo jiolahy mpanao izany asa ratsy izany. Nahitam-bokany avy hatrany izany satria lehilahy roa efa fanta-daza amin'ny famakiana trano, fanendahana sy ny fanaovana sinto-mahery, ary efa nampikaikaika ireo mponina eny amin'iny faritra Andavamamba sy ny manodidina iny no tra-tehaky ny polisy. Efa teo am-pikononkononana hanao ny asa ratsiny teo akaiky ny UPRIM Andavamamba ireto jiolahy ireto no saron'ireo polisy nanao fanamiana sivily ary mbola nahitana sabatra lava lela teny amin'izy ireo. Marihina fa efa mpamerin-keloka izy roalahy ireto ary efa nisy olona an-jatony nandefa fitarainana teny anivo'ny polisy nitory azy ireo.